सर्वेन्द्र खनाललाई खुलापत्र | Kendrabindu Nepal Online News
सर्वेन्द्र खनाललाई खुलापत्र
१४ बैशाख २०७७, आईतवार १७:०४
सर्वेन्द्र खनाल ज्यू
पूर्व आइजीपी, नेपाल प्रहरी ।
गत वैशाख ११ गतेभन्दा अघिसम्म म तपाईंलाई निसन्देह श्रद्धाले हेर्थेँ । तपाईंले नेपाल प्रहरीमा रहँदा के–कस्ता राम्रा काम गर्नुभयो, भन्न सक्दिन । तर, एउटा ‘सेलिब्रेटी’ पुलिसको रुपमा गहिरो छाप थियो । तपाईंहरु जस्ता मान्छे पुलिसमा हुँदा देशको सुरक्षा ब्यवस्था भरपर्दो हुन्छ भन्ने विश्वास पनि थियो, मनमा । म जस्तै धेरैलाई यही हुँदो हो ।
जब बैशाख ११ गतेको बिहान तपाईंको पछिल्लो कर्तुत ‘सांसद अपहरण’ मिडियामा आयो । म अवाक बने । त्यसपछि तपाईंको प्रष्टिकरण सुन्न प्रतिक्षारत रहेँ । किनभने मलाई पूर्णरुपमा विश्वास थिएन, त्यस घटनामा तपाईंको यो हदसम्मको संलग्नता । तर, जब तपाईंको गोलमटोल, ढाँट–छल र कपटपूर्ण भनाईहरु आउन थाले त्यसपछि भने तपाईंमाथिको विश्वास र आदर चकनाचुर भए । तर, एउटा कोणवाट धन्यबाद पनि भन्न मन लागिरहेको छ । किनभने ढिलै भएपनि ‘मुखुण्डो’ उघ्रिएको छ । यो मुखुण्डो नउघ्रिएको भए तपाईं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त नियुक्त हुने सूचना पनि सोही अपहरण प्रकरणमा लिक भयो । धन्न चोरलाई चाबी बुझाउने अर्को शृङखला सुरु भएनछ ।
सुरक्षा निकायको प्रमुख भइसकेको मानिसको नैतिकता के हो ? यस प्रश्नको जवाफ दिनकैलागि त तपाई शिरोमणि नै हुनुहुन्छ होला । तर, ब्यवहारमा मानिस कति हदसम्म तल जानसक्छ भन्ने उदाहरण ‘सेट’ गर्नुभयो । दुःख यसै ठाऊँमा हो । तपाईंसँगै हल बाँधिएर सांसद उठाउन गएका महेश बस्नेत र तपाईंको गाऊँले सांसद किसान श्रेष्ठको बारेमा मलाई धेरै भन्नु छैन । उनीहरुको सवालमा ‘राजनीतिको झण्डामुनी बस्नेहरु यस्तै हुन्छन्’ भनेर खिन्न हुँदै गौंडा कुर्न सकिएला । किनभने तीन बर्षपछि आउने चुनावमा उनीहरुलाई जनताले कारवाही गर्ने ठाऊँ छ । तर, राष्ट्रसेवक भएर जीवन बिताएको र राज्यको पेन्सन खाइरहेको मानिसलाई कदापी इतिहासले माफ गर्न सक्दैन ।
म शिक्षण पेशामा भएकीले के बुझ्दछु भने पढाउने भनेको शिक्षकले मात्र होइन । समाजले र राष्ट्रले पनि आफ्ना नगरिकलाई ब्यवहारका माध्यमबाट रातदिन पढाईरहेकै हुन्छ । तपाईंको पर्दाअघि देखिएको ब्यक्तित्वलाई हेरेर कति युवा पुलिसमा भर्ती भए । कतिले ‘रोलमोडेल’ ठानेर अनुशरण गरे ? ती आम मानिसलाई तपाईंले दिएको ‘क्लाइमेक्स्’ शिक्षा के हो ? आम नेपालीले तपाईजस्तै भित्र एउटा र बाहिर अर्को ब्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्ने हो ? तपाईंले यो समाजलाई प्रदर्शन गर्न खोजेको जवाफ के हो ?
यो पत्र किन मात्रै लेख्न बाध्य छु भने ‘मलाई मान्छेको पतनले दुखाउँछ ।’ तपाईंलाई सर्बेन्द्र खनाल बनाउन यो समाज र राष्ट्रले कति लगानी गरेको होला ? तर, आज राष्ट्रले लिएको विश्वासको खिल्ली उडेको छ । सबै उस्तै हुन् भन्ने आम आरोपलाई पुष्टि गर्ने ब्यवहार प्रदर्शन हुँदा पनि मन दुखेको हो । आइजीपी नै अपहरणमा संलग्न हुने देशमा आम अपहरणकारी सामान्य अपराधीको रुपमा ‘दर्ज’ हुन्छन् अब । समाजलाई लाग्ने योभन्दा ठूलो धक्का के हुन सक्ला ?
अन्त्यमा, तपाईं समेतले उठाएर लकडाउनका बेला तराईवाट काठमाडौं ल्याईएका पूर्व राज्यमन्त्री तथा सांसद डा. सुरेन्द्र यादव अपहरणको मुद्धा दर्ता गर्न प्रहरी कहाँ पुगेका थिए । तर किन हो, प्रहरीले दर्ता गर्न नै मानेन । यस्तो बेलामा गल्ती स्वीकार्नुहोला भनेर गरिने अनुरोधले तपाईंलाई झनै चिढ्याउला । बरु बाँकी छ भने सक्कली अनुहार उघार्दै रहनुहोला । किनभने फटाईंका यस्ता ब्यवहार जति प्रदर्शन गर्दै जानु हुन्छ, उति नै पार्टीभित्र विश्वासको वातावरण थपिदै जान्छ । सायद तपाईंले बुझेको राजनीति यही नै हो ।
तपाईंको जवाफको प्रतिक्षामा कहिल्यै नरहने
Dr. surendra yadav, sarwendra khanal
Prevजनता समाजवादी पार्टीको दल दर्ता प्रक्रिया रोक्न निवेदन
समाजवादी नेता यादवलाई अपहरण गरेको उजुरी दर्ता गर्न प्रहरीद्धारा अस्वीकारNext
अध्यादेश प्रकरणमा तौल घटाएका ६ भिआइपी
पूर्वआइजिपी खनालको स्पष्टिकरण- ‘प्रहरी सेवा सकिए पनि जीवन सकिएको छैन’, कमेन्टमा गालीको वर्षा
फिल्ममा प्रहरीलाई सकारात्मक भूमिकामा देखाऔं- आजिपी खनाल
सवारी चालकलाई प्रहरीको फूलमाला र शुभकामना (फोटोफिचर)
भोजपुर काण्ड: संसदीय समितिमा आइजिपी सर्वेन्द्र खनालको वयान
‘गलबन्दी’ गायकलाई आइजिपी खनालको फोन